Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Amazon na-ekwe nkwa nnukwu azụmahịa n'oge izu ụka Cyber ​​​​Monday
Kaa akara kalenda gị maka izu-ụka nke nchekwa ego. Amazon taa kpughere nlegharị anya nke puku kwuru puku ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa n'oge izu ụka Cyber ​​​​Monday, nke na-amalite na Satọde, Nọvemba 27, wee ruo Mọnde, Nọvemba 29.
N'ime mmemme azụmahịa ahụ, ndị ahịa nwere ike ị nweta ego nchekwa dị egwu n'ofe ụdị ọ bụla, yana mbelata dị ukwuu na ngwaahịa ndị a ma ama yana ihe ga-enwerịrị gụnyere elektrọnik sitere na Samsung na LG, ụlọ na kichin dị mkpa sitere na Shark, Vitamix, na Cuisinart, ihe egwuregwu ụmụaka ga-enwerịrị. site na Hasbro, LEGO, na Crayola, ọkacha mmasị mara mma sitere na Revlon, nhọrọ kachasị mma sitere na Ray-Ban, wee họrọ ngwaọrụ ndị enyere Alexa aka dị ka Amazon Fire TV 50" 4-Series. Ogologo izu ụka niile, ndị ahịa nwekwara ike ịzụ ahịa puku kwuru puku ahịa dị ịtụnanya sitere na ndị mmekọ na-ere ahịa nọọrọ onwe ha, ọtụtụ n'ime ha bụ obere azụmaahịa na obere obere, gụnyere azụmahịa sitere na ụlọ ọrụ ụmụ nwanyị nwere, ndị ojii nwere na azụmaahịa ezinụlọ ndị agha.
Maka ndị ahịa chọrọ ntakịrị mkpali maka ihe ha ga-enye ndị ha hụrụ n'anya n'afọ a, Amazon ekpuchila gị. N'ime oge niile ndị ahịa nwere ike ịga n'ihu ịzụ ahịa ma chọpụta ihe sitere na ntuziaka onyinye kachasị ukwuu nke Amazon ka-gụnyere ndepụta ihe egwuregwu ụmụaka na-ewu ewu na ndepụta ihe ọkacha mmasị Oprah, yana akwụkwọ ntuziaka ndị ọkacha mmasị nke ndị ahịa na nhọrọ onyinye onyinye ndị ọkachamara. onyinye ndu, nke na-egosipụta nhọpụta kacha elu sitere na ndị ama ama A-ndepụta dị ka Jessica Alba, Jojo Siwa, onye nrite ọla edo Suni Lee na influencer duo Aint Afraid, na ụlọ ọrụ mgbasa ozi gụnyere BuzzFeed na Refinery29, n'etiti ndị ọzọ.
Na Cyber ​​​​Monday, Amazon Live ga-eme emume ndụ dị iche iche na-egosi nhọrọ nke azụmaahịa kacha mma, ihe ngosi ngwaahịa, nnwale nnwale, na mkparịta ụka ndụ nke ndị ama ama na ndị na-eme ihe na-akwado, gụnyere supermodel na onye ọchụnta ego Miranda Kerr, onye na-abụ obodo na onye na-ede abụ Jessie James Decker, na ihe mmetụta ejiji Aimee Song. Ndị na-ekiri ihe nwere ike ịzụ ahịa ngwaahịa na ụdị egosipụtara ngwa ngwa site na carousel na-emelite ozugbo.
N'okpuru ebe a bụ nlele nke azụmahịa na ngwaahịa kachasị mma ga-adị na ụbọchị na oge dị iche iche n'etiti Satọde, Nọvemba 27 na Mọnde, Nọvemba 29, ka ọ na-eweta ikpeazụ. Ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa ahịa Cyber ​​​​Monday na ngwa ịzụ ahịa Amazon, ma ọ bụ site n'ịjụ, "Alexa, gịnị bụ azụmahịa m?" Họrọ azụmahịa Cyber ​​​​Monday ga-adịkwa na ụlọ ahịa kpakpando anọ nke Amazon na ebe ụlọ ahịa akwụkwọ Amazon. Ndị otu Prime nwekwara ike ịnụ ụtọ nkeji 4 nke ohere mbụ iji nweta nkwekọrịta ọkụ ọkụ kacha ewu ewu na Amazon n'oge ezumike na ụbọchị niile.
Egwuregwu ụmụaka na egwuregwu: Chekwaa ihe ruru 30% na nhazi ụlọ ahọpụtara, gụnyere site na LEGO na Playmobil. Chekwaa ihe ruru 30% na egwuregwu Hasbro. Chekwaa ihe ruru 30% maka ihe egwuregwu nka na nka nka sitere na Crayola na ụdị ndị ọzọ. Chekwaa ihe ruru 30% na egwuregwu bọọlụ ahọpụtara gụnyere Catan na tiketi ịnya igwe. Chekwaa ihe ruru 30% na ngwa nkuzi na egwuregwu Osmo. Chekwa ihe ruru 30% na akụrụngwa mmụta na ihe mmụta mmụta ụmụaka ụmụaka.
Ejiji nke oge: Chekwa ihe ruru 40% na jaketị na ogige ntụrụndụ Orolay down. Chekwa ihe ruru 30% na crocs họrọ. Chekwa ihe ruru 30% na họrọ Ezi & Co. bras na uwe ime. Chekwa ihe ruru 30% na ugogbe anya maka anwụ nke Ray-Ban họrọ. Chekwaa ihe ruru 20% na uwe elu ahọpụtara sitere na Calvin Klein, Tommy Hilfiger, DKNY na ndị ọzọ. Chekwa ihe ruru 25% na t-shirt omenala emere maka gị. Chekwaa ihe ruru 25% na ụdị arụ ọrụ yana ụlọ ezumike sitere na Shopbop, gụnyere Honeyew Intimates, Z Supply, na Alala.
Ụlọ na kichin: Chekwaa ihe ruru 35% na họrọ ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa wee họrọ ngwa nri na kichin sitere na All-Clad, Ninja, Vitamix, Calphalon, Cuisinart na SodaStream. Chekwaa ihe ruru 31% na oghere iRobot Roomba họrọ, họrọ ikuku ikuku sitere na Blue Air na Coway, yana igwe akwa si n'aka Nwanna na onye ọbụ abụ. Chekwa ihe ruru 30% na arịa ụlọ ahọpụtara.
Eletrọniki: Chekwaa ihe ruru 33% na TV ndị Samsung, Sony na LG họrọ. Chekwaa na ekweisi ahọpụtara sitere na Bose, Sony, na JBL. Chekwaa ihe ruru 30% na igwe nlebanya HP, laptọọpụ na kọmpụta niile dị n'otu. Chekwa ihe ruru 34% na họrọ foto foto dijitalụ Nixplay. Chekwaa $20 na họrọ ndị njikwa Nintendo Switch Pro. Chekwa 25% na MYNT3D Ọkachamara Mbipụta 3D Pen.
Mma na nlekọta onwe onye: Chekwaa ihe ruru 50% na brọsh eze eletrịkị họrọ site na Oral-B na Philips Sonicare. Chekwaa ihe ruru 39% na ncha ọkụ eletrik, agụba na agụba sitere na Braun, Gillette na ndị ọzọ. Chekwaa ihe ruru 30% na nlekọta ntutu sitere na Revlon, Bed Head, na ụdị ndị ọzọ. Chekwaa ihe ruru 52% na ngwa nyocha DNA nke mkpụrụ ndụ ihe nketa 23 naMe.
Ụdị Amazon: Chekwaa ihe ruru 30% na ngwaahịa kichin Amazon Basics. Chekwaa ihe ruru 30% na uwe maka ụmụaka na ụmụ ọhụrụ sitere na ụdị anyị. Chekwa ihe ruru 30% na kọfị sitere na ụdị anyị.
Ngwaọrụ Amazon: Chekwaa ruo 47% na Echo Show 5. Chekwaa ruo 45% na Amazon Halo Band mma tracker. Chekwa ihe ruru 40% na Kindle yana ruo 28% na Kindle Paperwhite Kids. Chekwaa ihe ruru 40% na mbadamba Fire HD 10 Kids Pro. Chekwaa ihe ruru 36% na Fire TV Stick 4k Max. Chekwaa ihe ruru 30% na Amazon Fire TV 50” 4-Series.
Mmelite Ụlọ, Ngwa, na Ogige: Chekwa ihe ruru 30% na họrọ ngwaọrụ BLACK+DECKER. Chekwaa na họrọ ngwaọrụ sitere na DEWALT, GEARWRENCH, na SKIL. Chekwa 25% na họrọ Ọkwa Home mkpọchi smart. Chekwa ihe ruru 40% na spas na ọdọ mmiri ahọpụtara site na Bestway na ndị ọzọ.
Nwa: Chekwaa na nhọrọ ụmụaka dị mkpa sitere na Philips Avent. Chekwaa na họrọ ngwaahịa nri sitere na Dr. Brown dị ka karama na pacifiers. Chekwaa na strollers họrọ Cybex gb Pockit. Chekwa ihe ruru 30% na oche ụgbọ ala Britax họrọ. Chekwa 25% na họrọ Nchekwa 1st Too na Gaa oche ụgbọ ala. Na mgbakwunye, chekwaa ihe ndị sitere na Joovy n'oge ezumike a.
Anu ulo: Chekwa 30% na onyinye na akụrụngwa ahọpụtara, gụnyere ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ọgwụgwọ, akwa na akwa akwa. Chekwa ihe ruru 25% na ihe nlekọta anụ ụlọ Bissell họrọ. Chekwa 20% na Petmate Husky Dog House maka nkịta ruru 90 pound. Nweta ihe nlele nke ngwaahịa mgbakwunye Greenies n'efu, ka ọ na-eweta ikpeazụ.
Egwuregwu na Ọpụpụ: Chekwa ihe ruru 30% na họrọ karama mmiri Nalgene Sustain. Chekwa ihe ruru 30% na ngwaahịa ike Weider Platinum. Chekwa ihe ruru 30% na karama na ngwa CamelBak họrọ. Chekwaa ihe ruru 30% na skooters eletrọnịkị, akwa igwe kwụ otu ebe, yana guzo na Segway, Hover-1 na ndị ọzọ.
Ihe Ntụrụndụ: Zọpụta ruo 50% na họrọ Vidiyo Prime Minister ihe nkiri ị ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụ zụta, site na mwepụta ọhụrụ ruo na oge gboo, gbakwunyere ihe ngosi TV, ọdịnaya nke oge, na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ndị ahịa ọhụrụ na-enweta 50% kwụsịrị NBA League Pass na ndenye aha NBA Team Pass nke oge a na-eso nnwale ụbọchị asaa n'efu. Chekwa na Amazon Music Unlimited, efu maka ọnwa atọ maka ndị ahịa ọhụrụ, ma ọ bụ n'efu maka ọnwa isii site na ịzụta ngwaọrụ Amazon Echo họrọ. Na mgbakwunye, ndị ahịa nwere ike ige ntị pọdkastị Wondery ọkacha mmasị ha na ndenye 40% kwụsịrị otu afọ na Wondery+. Chekwaa ihe ruru 59% na otu ọhụrụ kwa afọ IMDbPro. Ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike ịchekwa ihe ruru 80%. eBooks ewu ewu, ruo 50% na nhọrọ Kindle aha pụrụ iche, na ruo 30% na Wheel of Time igbe igbe.
Njem Virtual na Ahụmahụ: Maka ndị nọ na ndepụta gị nwere ihe niile ma ọ bụ ndị na-achọ ahụmahụ, chekwaa ruo 50% na ahụmahụ Amazon Explore niile, ndị ọkachamara mpaghara kwadoro. Ndị ahịa US na-enweta ọtụtụ ahụmịhe mgbasa ozi na-emekọrịta ihe n'ofe ụwa - niile sitere na ntụsara ahụ nke ụlọ ha. Ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa ihe pụrụ iche, mụta ka esi eme ezumike gburugburu ụwa, yana ahụmịhe onyinye nye ndị enyi na ezinụlọ ha.
Ụlọ ahịa na kwadoo obere azụmaahịa na ọkara
Amazon na-akwado ihe karịrị 500,000 US ndị mmekọ na-ere onwe ha, ọtụtụ n'ime ha bụ obere azụmaahịa na ọkara, na ụlọ ahịa ya ma na-enyere ha aka iru ọtụtụ narị nde ndị ahịa n'ụwa niile, na-abawanye ahịa ha ma mepụta ọrụ-gụnyere ihe ruru nde US 1.8. dabere ọrụ na 2020. Ndị ahịa nwere ike na-akwado ndị a obere na ọkara-sized azụmahịa na-azọpụta na onyinye site ịzụ ahịa na Small Business, Amazon Handmade na Amazon Launchpad onyinye nduzi.